Xog: Yaa diiday in Midowga Musharaxiinta kaalin laga siiyo shirka MUQDISHO? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Yaa diiday in Midowga Musharaxiinta kaalin laga siiyo shirka MUQDISHO?
Xog: Yaa diiday in Midowga Musharaxiinta kaalin laga siiyo shirka MUQDISHO?
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo looga hadlayo dhameystirka Doorashooyinka dalka, raadinta dhaqaalaha ku baxaya, diyaarinta Habraaca Doorashada Golaha Shacabka iyo Qodobo kale.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, shirka ayaa waxaa loo diiday inay ka qeyb galaan xubnaha Midowga Musharixiinta oo dhawaan codsaday in kaalin laga siiyo shirka, si ay kaalin ugu yeeshaan aayo ka tashiga doorashada dalka
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay Caasimada Online in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ay diideen in Midowga Musharixiinta kaalin laga siiyo shirka.